JVCHA-FR36-P-K Marshmallow Headphones (Remote) – ပန်းရောင် | အွန်လိုင်း SHOP.COM.MM တွင် ၀ယ်ယူမည်
JVC HA-FR36-P-K Marshmallow Headphones (Remote) – ပန်းရောင်
2017 နိုဝငျဘာ 26
It is the best earbuds I have ever bought. They are not itchy. Fit perfectly in my ear. နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
May Kyi Oo
JVC HA-FR36-P-K Marshmallow Headphones (Remote) – Pink မဆိုးပါဘူး ကောင်းပါတယ် နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
2016 ဧပွီ 25
JVC နားကြပ်လေး အရမ်းကောင်းပါတယ်။
အရောင်လေးလဲ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတယ်။ နားကိုလဲ ဒဏ်မဖြစ်စေဘူး။ နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန် ဖျောက်ထားရန်
iPod,iPhone,iPad,BlackBerryများနှင့်လက်အကူမပါဘဲအသုံးပြုနိုင်ပြီးအရောင်စုံပါရှိသည်။iPodnano6G နှင့်လည်းဆက်သွယ်နိုင်ပြီးနားအိမ်အတွင်းသက်သောင့်သက်သာမှုရှိစေရန် ပြုလုပ်ထားသည်။အသံထွက်အားကောင်းမွန်ပြီးနောက်ခံအသံများကိုပါ ကြားနိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအချက်အလက် HA-FR36-P-K Marshmallow Headphones (Remote) – ပန်းရောင်